Italy oo hiiladii San Paolo ka dooneysa San Siro si ay ugu soo baxdo koobka adduunka 2018
Sunday, November 18th, 2018 - 15:41:43
Monday November 13, 2017 - 00:29:38 in Wararka by Hussein Hadafow
Xulka Azzuri ayaa ka qeyb galay 18 ka mid ah 20 jeer ee la qabtay koobka adduunka, waxayna hanatay afar jeer oo kala ah 1934,1938, 1982 iyo 2006 waana dalka labaad ee kusoo xiga Brazil waxaana afar jer sidoo kale ku guuleystay dalka Germany.
Italy ayaan kasoo muqaan koobkii aduunka 1930 oo dalka Uruguay lagu qabtay waxaana ugu wacnaa dhaqaalaha yurub oo dhibaato ku jiray xilligaa waxaan yurub tartankaas ku matalay dalalka Belgium, France, Yugoslavia iyo Romania.
Italy ayaa sidoo kale seegtay ka qeyb galka tartanka sanadii 1958 kadib markii ay kasoo gudbi weysay isreebreebka, Azzuri ayaa qeybta 8 ee isreebreebka waxay kula jirtay dalaaka Portugal iyo Nother Ireland waxayna ku dhameystay kaalinta labaad e Group-ka waxaana koowaad kusoo baxay Nothern Ireland.
Ciyaartoyda Xulka qaraka Talyaaniga ayaa qeylo dhamaan u dirsatay taageerayaashooda gaar ahaan kuwa magaalada Milano oo ay ka dalbadeen in ay soo buuxiyaan garoonka muujiyaana sida ay diyaar ugu yihiin garabsiinta ciyaartoyda.
Kulanka ayaa ka dhici doona garoonka San Siro ee eemagaalada Milano waxuuna kusoo beegmayaa xilli ay Italy Qatar ugu jirto in ay seegto dhacdada ugu kubadad cagta dunida.
Isreebreebki koobki adduunka 1998 waxayn sida oo kale Italy kuladma kala baxa la ciyaartay dalka Russia oo lugtii hore barbaro 1-1 soo galeen, waxayna lugta labaad ka dhacday garoonka San Paolo ee magaalada Napoli oo ay 69 , 207 taageere.
Azzuri ayaa kulanka lugta labaad Russia uga adkaatay 1-0 waxaana goolka u dhaliyay Pierluigi Casiraghi, waxaana door cajiib ah ka ciyaaray taagerayaasha Azzuri.
Haddaba su’ashu waxay tahay San Siro ma u hiilin doona Azzuri?